Lionel Messi oo Taleefanka ku dhageystay mid ka mid ah Agaasimayaasha Barcelona – Gool FM
Lionel Messi oo Taleefanka ku dhageystay mid ka mid ah Agaasimayaasha Barcelona
Byare November 22, 2017
(Catalonia) 22 Nof 2017. Mustaqbalka Lionel Messi ee Barcelona ayaan weli caddeyn kaddib markii uu laacibka reer Argentina Taleefanka ku dhageystay mid ka mid ah agaasimayaasha kooxda.
Qandaraaska uu 30 jirka iminka ku joogo Camp Nou ayaa ka dhacaya dhammaadka kal ciyaareedka haddii wax heshiis ah la gaari waayana wuxuu awoodi doonaa inuu Janaayo wada hadalo la sameeyo kooxaha doonaya isla markaana ay suuro gal noqon doonto inuu bilaash kaga tago Barca suuqa xagaaga.
Inkastoo ay jireen qiyaas fikradeed ah in labada dhinac ay ku heshiiyeen heshiis cusub misane ma jiraan wax si rasmi ah loo shaaciyay taa oo cabsi galineysa mustaqbalka laacibka ee kooxda.
Sida uu sheegayo warsidaha Diaro Gol in Messi uu taleefanka marar badan ku dhageystay amaba ku damiyay mid ka mid ah agaasimayaasha kooxda taa oo shaki sii galineysa mustaqbalkiisa Kooxda.
Warkan ayaa imaanaya xilli uu madaxwaynaha Barcelona Josep Maria uu sheegay in Lionel Messi uu horaantii sanadkan kooxda u saxiixay saddex heshiis inkastuusan faah faahin waxa ay kala yihiin heshiisyadaasi.
Maamulka Barcelona oo ku kala qaybsamay badalka Philippe Coutinho
Gianluigi Buffon oo u jawaabay Ivan Rakitic ka hor kulankooda caawa